သာမိုမီတာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအတွက် TP TN နှင့်တရုတ် T အမျိုးအစား Thermocouple Constantan ဝါယာကြိုး TANKII
သာမိုမီတာအတွက် TP TN နှင့် T T Thermocouple Constantan Wire
ISO9001 လက်မှတ်နှင့် T အမျိုးအစား Thermocouple Constantan ဝါယာကြိုး
T Type Thermocouple Constantan Wire Insulation တွင် Polyurethane, polyester, polyester imine တို့ပါဝင်သည်
စပယ်ယာအမည်: Cu-CuNi (Constantan)
Thermocouple Constantan Wire ကိုစက်မှုစျေးကွက်အားလုံးနီးပါးတွင်တွေ့နိုင်သည်။ Power Generation Oil/Gas, Pharmaceutical, biotech, Cement, Paper & Pulp, စသည်တို့ကို Thermocouples များကိုမီးဖိုနှင့်မီးဖိုများကဲ့သို့ toaster မီးဖိုများနှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများတွင်လည်းသုံးသည်။
FOB စျေးနှုန်း US $ 0.5 - 9,999 / Piece
Min.Order အရေအတွက် 100 Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 10000 Piece/Pieces
ထုတ်ကုန်အမည်: T အမျိုးအစား Thermocouple Constantan Wire
စပယ်ယာ Cu-CuNi (Constantan)
Thermocouple အမျိုးအစား: T
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်: တစ်လလျှင် ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်
မျက်နှာပြင် တောက်ပခြင်း/ ဓာတ်တိုးခြင်း
HS ကုဒ် 74082900
thermocouple လျော်ကြေးငွေကေဘယ်များကိုအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအတွက်သုံးသောကြောင့်တူရိယာကြိုးများဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ တည်ဆောက်မှုသည်တူရိယာတူရိယာကြိုးနှင့်တူသော်လည်းစပယ်ယာပစ္စည်းသည်ကွဲပြားသည်။ Thermocouple များကိုအပူချိန်ကိုသိရှိနားလည်ရန်ဖြစ်စဉ်များတွင်သုံးပြီးညွှန်ပြခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် pyrometers များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ thermocouple နှင့် pyrometer ကို thermocouple extension ကေဘယ်များ / thermocouple လျော်ကြေးပေးသောကေဘယ်များဖြင့်လျှပ်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤ thermocouple ကေဘယ်များအတွက်အသုံးပြုသော conductors များသည်အပူချိန်ကိုအာရုံခံရန်အသုံးပြုသော thermocouple ကဲ့သို့တူညီသော thermo-electric (emf) ဂုဏ်သတ္တိများရှိရန်လိုအပ်သည်။
Type T Thermocouple (ကြေးနီ + / ကွန်စတန်-) T သည်ကျဉ်းမြောင်းသောအကွာအဝေးနှင့်တိကျမှုမြင့်သော thermocouple ဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပူချိန်တိုင်းတာမှုတပ်ဆင်ခြင်းများကြောင့်၎င်းသည်လူကြိုက်များသည်။ စံကန့်သတ်ချက်များအတွက်တိကျမှု± 1 ° C /2° F နှင့်အထူးကန့်သတ်ချက်များအတွက်± 0.5 ° C / 1 ° F နှင့်အပူချိန်အတိုင်းအတာ -330 ° F ~ 662 ° F (-200 ° C ~ 350 ° C) ပေါ်မူတည်သည်။ wire gauge အရွယ်အစားပေါ်တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အဓိကအားဖြင့် KX, NX, EX, JX, NC, TX, SC/RC, KCA, KCB ကို thermocouple အတွက်လျော်ကြေးပေးသောဝါယာကြိုးများကို၎င်းအားအပူချိန်တိုင်းကိရိယာများနှင့်ကေဘယ်များတွင်သုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ thermocouple လျော်ကြေးငွေထုတ်ကုန်များကို GB/T 4990-2010 'extension အလွိုင်းဝါယာကြိုးများနှင့် thermocouple များအတွက်ကြိုးများလျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် IEC584-3' Thermocouple အပိုင်း3လျော်ကြေးပေးကြေးနန်း '(နိုင်ငံတကာစံ)
ကွန်မန့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဝါယာကြိုး: thermocouple ကုဒ်+C/X၊ ဥပမာ SC, KX
X: extension အတွက်အတိုကောက်အားဖြင့်လျော်ကြေးဝါယာကြိုး၏အလွိုင်းသည် thermocouple ၏အလွိုင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်
C: လျော်ကြေးအတွက်အတိုကောက်အားဖြင့်လျော်ကြေးဝါယာကြိုး၏အလွိုင်းသည်အပူချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတွင် thermocouple အလွိုင်းနှင့်ဆင်တူသောအက္ခရာများကိုဆိုလိုသည်။
၁။ အပူပေးခြင်း - မီးဖိုများအတွက်ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ
2. အအေးခံ - ရေခဲသေတ္တာ
၃။ အင်ဂျင်ကာကွယ်မှု - အပူချိန်နှင့်မျက်နှာပြင်အပူချိန်
4. အမြင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု - သံသွန်း
Thermocouple ကုဒ် Comp ။ ရိုက်ပါ Comp ။ ဝါယာကြိုးအမည် အပြုသဘောဆောင်သည် အဆိုးမြင်
နာမည် ကုဒ် နာမည် ကုဒ်
S SC copper-constantan ၀.၆ ကြေးနီ SPC ကိန်း ၀.၆ SNC
R RC copper-constantan ၀.၆ ကြေးနီ RPC ကိန်း ၀.၆ RNC
K KCA သံ-အဆက်မပြတ် ၂၂ သံ KPCA အမြဲမပြတ် ၂၂ KNCA
K KCB ကြေးနီ-ကိန်းသေ ၄၀ ကြေးနီ KPCB ကိန်း ၄၀ KNCB
N NC သံ-သံဓာတ် ၁၈ သံ NPC ကိန်း ၁၈ NNC
E EX NiCr10-Constantan45 NiCr10 EPX Constantan ၄၅ ENX
J JX သံ-အဆက်မပြတ် ၄၅ သံ JPX ကိန်း ၄၅ JNX
T TX copper-constantan ၄၅ ကြေးနီ TPX ကိန်း ၄၅ TNX
Insulation နှင့် Sheath အရောင်
ရိုက်ပါ လျှပ်ကာအရောင် အခွံအရောင်
အပြုသဘောဆောင်သည် အဆိုးမြင် G H
SC/RC အနီေရာင် အစိမ်းရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
KCA အနီေရာင် အပြာရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
KCB အနီေရာင် အပြာရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
KX အနီေရာင် အမည်းရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
NC အနီေရာင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
NX အနီေရာင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
EX အနီေရာင် အညိုရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
JX အနီေရာင် ခရမ်းရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
TX အနီေရာင် အဖြူရောင် အမည်းရောင် မီးခိုးရောင် အမည်းရောင် အဝါရောင်
မှတ်ချက် - G general ယေဘူယျအားဖြင့်သုံးရန် H heat အပူခံနိုင်ရည်အတွက် S – Precision class ပုံမှန်အတန်းအစားတွင်လက္ခဏာမရှိပါ
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ: ပလတ်စတစ်ဖလင်နှင့်ထုပ်ပိုးထားသောအထုပ်နှင့်အတူလိပ်လျှင် 500m/1000m order အရေအတွက်နှင့် customer လိုအပ်ချက်အရ
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်။ ပင်လယ်/ လေကြောင်း/ အမြန်ပို့ခြင်း